जसले भारतीय च्यानलहरु प्रसारण बन्द गरेर नेपालीहरुलाई खुशी दिए ! [ सम्मान स्वरुप एक शेयर गरौँ – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/जसले भारतीय च्यानलहरु प्रसारण बन्द गरेर नेपालीहरुलाई खुशी दिए ! [ सम्मान स्वरुप एक शेयर गरौँ
जसले भारतीय च्यानलहरु प्रसारण बन्द गरेर नेपालीहरुलाई खुशी दिए ! [ सम्मान स्वरुप एक शेयर गरौँ
काठमाडौं। केवुल अपरेटरहरुले नेपालमा भारतीय न्यूज च्यानल प्रशारण बन्द गरेका छन्। नेपालमा विदेशी च्यानल वितरण गर्दै आएका मल्टी सिस्टम अपरेटरहरुले दुरदर्शन बाहेकका भारतीय न्युज च्यानलहरुको प्रसारण नगर्ने भएका हुन्। यो खबर नागरिकमा छ। मेगा म्याक्स टिभीका उपाध्यक्ष ध्रुव शर्माका अनुसार अपरेटरहरुले यस्तो निर्णय गरेको बताए। भारतीय च्यानहरुले पछिल्लो समय पत्रकारिताको सामान्य इथिक्स पनि नराखि नेपालका बारेमा विभिन्न अ’नर्गल प्रचार गर्दै आएका थिए।
कुनै पनि सञ्चार सेवाको प्रसारणमा बन्देज लगाइनु लोकतान्त्रिक आचरण होइन तर यतिबेला परिस्थिति बेग्लै छ । ती सञ्चार संस्था होइन, घृणाको खेती गर्ने माध्यम बनेका छन् तपाईंहरुले बन्देज भन्दा पनि प्रसारण नगर्ने निर्णय गर्नुभएको होला । दूरदर्शनलाई खुला राखेर तपाईंहरुले दूरदर्शी निर्णय गर्नुभएको छ । यसले सञ्चार र संवाद टुट्नबाट जोगाउनेछ ।
नेपालमा फैलिन सक्ने घृ’णा र ग’लत सूचना त तपाईंहरूको निर्णयले रोकिएको छ तर भारत र विश्वभर यस्तो आपराधिक प्रकृतिको वि’तण्डा रोक्न सरकारले नै थप केही गर्नु जरूरी छ हाम्रो आ’पत्ति च्यानलसँग होइन, कन्टेन्टसँग हो । आशा गरौँ, कन्टेन्टहरू सच्च्याइनेछन् र परिस्थिति पूर्ववत् हुनेछ । तपाईंको म्याक्स टिभीलगायत सम्पूर्ण प्रसारकको जय होस् ! < p srcset="https://kavreonlinepatra.com/wp-content/uploads/2020/07/Screenshot_20200710-081032_1-504x1024-1-148x300.jpg 148w, https://kavreonlinepatra.com/wp-content/uploads/2020/07/Screenshot_20200710-081032_1-504x1024-1.jpg 504w" sizes="(max-width: 148px) 100vw, 148px" />